Qaybta 1.Why u baahan tahay si ay u tirtiri aad iPhone hor iibin
Qaybta 2.How si ay u tirtiri aad iPhone hor iibin
Qaybta 3.Poll: Waxa aad sida caadiga ah ka hor inta iibinta iPhone sameeyo
Qaybta 1. Maxaad u baahan tahay si ay u tirtiri aad iPhone hor iibin
Waxaad lahaa wanaagsan aad iPhone kula sano, iyo waqtiga ayaa ugu dambeyntii soo si aad u iibiyo. Ama waxaa laga yaabaa, in aad u arkaa in ay ku habboon tahay in la siiyo iska iPhone qof. Wax kasta oo sabab u yahay, waa inaad u bixinayso iska jir iPhone oo waa in aad u tirtiri iska dhammaan xogta aad ka hor inta uusan isagoo sidaas samaynaya.
Waxaan rajeynayaa, idinkoo ahayn kuwo ka mid ah kuwa la yaabanahay sababta ay tahay in aad tirtirto xogta oo dhan. Ma jiro qof u baahan yahay si aad u aragto sawiro shakhsi, fariimaha ama wax files kale. Iyo, seenyada loo xaaladda ugu xun yahay, haddii xogta ku dhacdo gacmo qaldan waxaa loo isticmaali karaa in aad ka dhanka ah gelin. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad codes pin dukaanka kaararka aad, ama waxaa laga yaabaa alarm guriga aad telefoon. Ma jeclaan lahayd inaad qof kale si ay u leeyihiin?
Taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay masixi dhammaan xogta ka iPhone. Dad badan tahay in ay tahay mid aad u fudud, kaliya aad u tagtaan inaad Settings> General> celi> masixi All Content iyo Settings. (Ka hor inta aan sidaa yeelno, xusuuso in aad saxiixdo ka mid ah iCloud iyo adeegyada kale sida iMessage iyo ID Apple). Runtu waxa ay tahay isagoo tirtira xogta aad ma aha in fudud. Xitaa ka dib markii tirtiro dhammaan content gacanta iyo soo celinta aad iPhone in goobaha warshad, xogta aad weli la raadsan laga yaabaa. Sidee? Taasi waa sababta ay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo software, sida Wondershare SafeEraser, si loo hubiyo in dhammaan xogta aad ayaa waxaa si joogto ah la tirtiro.
Qaybta 2. Sida loo tirtiri aad iPhone hor iibin
Wondershare SafeEraser waa aalad taas oo ah labada diyaar u kombiyuutarada Windows iyo Mac. Waxaa kuu saamaxayaa inaad si joogto ah masixi xogta ka iPhone iyo ilaaliyo dhammaan xogta marka aad iibiso ama bixiyo qalab aad. Wondershare SafeEraser waa la jaan qaada nooca ugu dambeeya ee macruufka, iyo iPhone ugu dambeeyey, sida iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus.
Sida laga soo xigtay US Department of Justice, mid ka mid ah tobankii qof uu yahay dhibane tuugada aqoonsiga. Iyada oo qalabka saxda ah, dhammaan xogta aad tirtiray, sida emails, Xog bangiyada, qoraalo muhiim ah, iwm la soo kabsaday laga yaabaa. Takhalusid files kaliya ee ka saaraysaa jidka macluumaadka, laakiin xogta weli sii joogo waxaa, diyaar u ah soo kabashada. Waa maxay SafeEraser falaa waa in software waxa uu xaqiijinayaa dhammaan xogta aad si joogto ah tirtirayaa, oo ay ku jiraan xogta laga yaabaa in aad ilowday ku saabsan, sida taariikhda dhirta Safari iyo cookies. By sidaas samaynaya, Wondershare SafeEraser hubisaa in xogta aad tirtiray dhaxyada tirtiray wanaag.
Tani baabbi'iyuhu xogta xirfad taageertaa la tirtiro xogta files socda iyo: Messages, Call History, Facetime, Xiriirada, Mail, Calendar, Xusuusin, Notes, Voice Deymaha maqan, Safari Bookmarks, Photos, Videos, Apps, Settings System, Cache keyboard, Passbook, Lugood DB, iMessage, Safari Favorites, Safari History, farriinta, ID Apple, ID iCloud, Game Center, Apple Maps, Weather, Kaydka, Newsstand.
Tirtiro xogta kor ku xusan weli waa fikrad fiican, xataa marka aad ka iibsan aad telefoon cusub, haddii aad waa lumin, ama qof kaa xado.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Wondershare SafeEraser waa in habkan waxaa la samayn karaa iyadoo hal click, iyo xogta la tirtiray waqti. Waa kuwan sida.
1. Open Wondershare SafeEraser iyo dooran masixi All Data uu furmo suuqa hoose.
2. Markaas, software waxay samayn doonaan jeeg ammaanka ah, haddii ay dhacdo. Nooca 'tirtirto' si loo xaqiijiyo in aad si oo sii wadaan geeddi-socodka tirtiro ah.
3. Marka habka tirtiro bilaabmin, hubi in aad iPhone dhaxyada ku xiran waqtiga dhan. Qaabkan waxaad noqon doontaa hubiyo in dhammaan xogta aad si joogto ah la tirtiro.
4. Marka habka takhalusid la sameeyo, waxaad heli doontaa ogeysiis ah in geeddi-socodka la soo gabagabeeyo.
Tirtiro xogta ka telefoonka ka hor inta iibiyo, waa in ay noqdaan waa in aad u. Ma ogaan kartid, kuwaas oo ka heli karaan qabsaday ee aad telefoonka iyo qofka in sida xun loo isticmaalo waxaa laga yaabaa in warbixin-shaqsiyeedkaaga. In seenyada ay dhacdo ugu xumaa, xitaa noqon kartaa qof dhibbane ah tuugada aqoonsiga.
Sidaas, ka hor inta aad iibiso telefoonka waxaa jira afar waxyaabood oo aad sameyn karto. Waxaad tagi kartaa xogta oo dhan ku saabsan telefoonka, kaas oo halis cajiib sare. Qofna garan maayo cid uu ka heli karaan qabsaday xogta aad. Markaas, aad tirtirto gacanta laga yaabaa in macluumaadka aad, laakiin aan doorasho smart. Marka aad gacanta masixi xogta aad, xogta weli diyaar u ah soo kabashada. Si kastaba ha ahaatee, doorashooyinkan waa xoogaa ammaan badan aan la tirtiro xogta aad ka oo dhan. Habka saddexaad noqon lahayd in ay dib u phone in goobaha warshad. Doorashadan waxa uu yahay mid ka mid ah ugu ammaanka badan marka la barbar dhigo labadii hore. Si kastaba ha ahaatee, in gacmaha qofka bal yaa garanaya waxa uu isagu / iyadu raadinaya, xogta in weli la soo kabsaday laga yaabaa. Iyo, in dhamaadka, ikhtiyaarka ugu ammaanka noqon lahaa la tirtiro xogta aad si joogto ah iyo si fiican wax dumiya xogta xirfadle, sida Wondershare SafeEraser. Fursaddan waa ikhtiyaarka ugu badbaado badan ee la tirtiro xogta aad, oo ma jirto si ay u soo kabtaan wax isticmaasho ka dib Wondershare SafeEraser.
Qaybta 3. Poll: Waxa aad sida caadiga ah ka hor inta iibinta iPhone sameeyo
Sidaas, ka hor inta iibinta iPhone, maxaad samayn doontaa?
a) Ma tirtiri xogta oo dhan (Risk aad u sarayso)
b) ka iPhone Delete xogta oo dhan gacanta (Risk aad u sarreeya)
c) Dib u celi aad iPhone in goobaha warshad ag maraya in Settings> General> celi> masixi All Content iyo Settings (qatar ah, Data Weli laga yaabaa in lagu soo kabsaday)
d) dhammaan macluumaadka ku saabsan iPhone la qalab xirfad sida Wondershare SafeEraser Gebi baabbi'in (Safe)
> Resource > iPhone > Sida loo ogolaan in aad iPhone Ka hor inta Iibinta Waxaa